Ipharadesi elincane ngokubona ukuze uphumule futhi udale - I-Airbnb
Ipharadesi elincane ngokubona ukuze uphumule futhi udale
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Iveta
U-Iveta Ungumbungazi ovelele
Ukuvumelana nemvelo nokugcina ubuqiniso bendawo esogwini bekulokhu kubalulekile emndenini wethu. Sinakekela indlu yethu yasehlobo esiyithandayo 'Paijas' ngezinhliziyo zethu nemiphefumulo yethu futhi manje sikumema ukuba uhlanganyele nathi ekhoneni lethu elincane lepharadesi.
Uma ulangazelela ukucwiliswa ebuhleni bezindawo zaseLatvia ezingakathintwa ezinamahlathi ezihlahla zikaphayini ezingapheli namabhishi anesihlabathi esimhlophe, indlu yasehlobo "Paijas" iyindawo lapho uzothola khona ukuthula kwakho kwangaphakathi.
Le ndawo ihlanganisa izindlu ezintathu: Indlu yomndeni, i-Barn kanye ne-Sauna house. Indlu ye-Sauna iyikhaya lomndeni wethu kodwa indlu yoMndeni kanye ne-Barn yamukelekile kubavakashi. Le ndawo itholakala endaweni eyi-200m ukusuka olwandle.
4.96 · 51 okushiwo abanye
I-Sīkrags ilele ngasogwini olungokomlando lwase-Livonia e-Slītere National park futhi ilungele imisebenzi ehlukahlukene yokuzijabulisa efana nokuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngezinyawo olwandle, ukushisa ilanga ngokuthula noma ukwenza isiko le-sauna yase-Latvian.
Umsingathi uzokwamukela futhi uzokwazi ukuhlangana nawe uma kunesidingo.
UIveta Ungumbungazi ovelele